Shiinaha L-Isoleucine CAS 73-32-5 loogu talagalay soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha 'Pharma Grade' (USP / EP) | Salaad
Magaca Badeecada: L-Isoleucine
CAS MAYA.: 73-32-5
L-Isoleucine (oo loo soo gaabiyo Iso) waa mid ka mid ah 18ka amino acids ee caadiga ah, iyo mid ka mid ah siddeed amino acids oo muhiim u ah jirka aadanaha. Waxaa loo yaqaan 'branched chain chain amino acids (BCAA) with L-Leucine and L-Valine Wadajir maxaa yeelay dhammaantood waxay ku jiraan silsilad dhinaca methyl ah oo ku jirta qaab dhismeedkooda molecular.
L-Isoleucine waa mid ka mid ah amino acids-ka lagama maarmaanka ah ee jidhku sameyn karin waxaana lagu yaqaanaa awooddiisa inay ka caawiso adkeysiga iyo ka caawinta hagaajinta iyo dib u dhiska murqaha. Amino acid-kan ayaa muhiim u ah dhisayaasha jirka maadaama uu gacan ka geysto kobcinta tamarta wuxuuna jirka ka caawiyaa inuu ka soo kabsado tababarka.
Saamaynta L-Isoleucine waxaa ka mid ah hagaajinta murqaha leucine iyo valine, xakamaynta gulukoosta dhiigga, iyo u siinta unugyada jirka tamar. Waxa kale oo ay hagaajinaysaa soosaarka hoormoonka koritaanka waxayna caawineysaa in la gubo dufanka dareeraha ah. Baruurtani waxay ku dhex jirtaa gudaha jirka mana aha mid si hufan loogu milmi karo iyada oo loo marayo cuntada iyo jimicsiga
L- Isoleucine wuxuu dhiirrigelin karaa isku-darka borotiinka wuxuuna hagaajin karaa heerka hoormoonka koritaanka iyo insulinta, si loo ilaaliyo dheelitirka jirka, wuxuu kordhin karaa shaqada difaaca jirka, wuxuu daweyn karaa cudurada maskaxda, si loo dhiirrigeliyo kororka rabitaanka cuntada iyo doorka ka hortagga dhiig-yaraanta. sidoo kale kor u qaadista dheecaanka insulin-ta. Badanaa waxaa loo isticmaalaa daawada, warshadaha cuntada, ilaalinta beerka, doorka beerka ee dheef-shiid kiimikaadka muruqyada ayaa aad muhiim u ah. Haddii la waayo, waxaa jiri doona cillad jireed, sida xaaladda miyir-beelka. Glycogenetic iyo amino ketogenic waxaa loo isticmaali karaa in lagu daro nafaqada. Ku shubista amino acid ama ku darida nafaqada afka.
Ilaha cuntada ugufiican ee L-Isoleucine waxaa kamid ah bariis bunni ah, digir, hilib, lowska, soybean iyo cunada oo dhan. Maaddaama ay tahay nooc ka mid ah amino acid muhiim ah, waxay ka dhigan tahay inaan lagu abuuri karin jirka aadanaha lagana heli karo kaliya cuntada.
Wareeg gaar ah [a] D20
Wareeg gaar ah [a] D25
saafi ah oo aan midab lahayn ≤BY6
wasakhda shaqsiyadeed ≤0.5% nijaasta guud≤2.0%
Maaddooyinka wanaagsan ee 'Ninehydrin-positive'
Wasakhda dabiiciga ah ee dabiiciga ah
Hore: L-Threonine CAS 72-19-5 oo loogu talagalay Fasalka Pharma (USP)
Xiga: L-Threonine CAS 72-19-5 Fasalka Cuntada (FCC / AJI / USP)
Fasalka L-Threonine Pharm, L-Valine 72-18-4, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, Nafaqada xoolaha, Fasalka Cuntada L-Threonine,